Isikhathi sasehlobo asiyona ize esinikezwa yize
Uqaphele: akekho othakazelisa ukuthi yiziphi izinhlelo esizozenza entwasahlobo noma yini esizoyenza ekwindla. Kodwa ngehlobo sizobuzwa! Phela, ihlobo liyisikhathi esikhethekile sonyaka, esikulindele ngenjabulo futhi esinikeza ithemba eliphezulu. Futhi sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi isihlobo sasehlobo asiyona izelelo esinikeziwe! Futhi kuyiqiniso.
Kubonakala sengathi siyakwazisa ihlobo esikoleni seminyaka - ngamaholide amahora amaningi alindelwe kanye nokuhlangana okuqhubekayo nenkululeko. Eqinisweni, lolu thando luyisineke, futhi luvele ... eminyakeni emihlanu edlule! Ngenxa yokuthi okhokho bethu bahlala e-Afrika, lapho izinga lokushisa kwemvelo liseduze nokushisa komzimba. Ukuhamba phambili ukusuka e-equator, abantu bavumelanisiwe lokuthi ilanga alishayi njalo. Kodwa uthando lokushisa luye lwasala: ngokungazi lutho lubonakala njengesimo esifanele kakhulu sokuphila. Singathanda ithanda le-ekwindla ngephunga lama-autumn amaqabunga kanye nethuba lokuthatha i-nap ngaphansi kwengubo efudumele, ebusika - ngokushushuluza kanye noNyaka Omusha, futhi entwasahlobo - ingoma yokukhala yokudonsa. Kodwa ihlobo kuphela lenza inhliziyo yethu ibambe kanzima: maduzane konke okuzokwenzeka ekuphileni kwethu kuyoba ngcono!
Yini ezokwenzeka kithi ngalokhu (futhi hhayi kuphela lokhu) ehlobo.
Sizozwa ukukhuphuka kwamandla. Esikhathini sethu sezulu, lapho inkathi ebandayo ibamba izingxenye ezimbili kwezintathu zonyaka, kukhona ukuqonda ukuthi umqhele wokudala imvelo akuyona yonke umuntu. Ibhere. Ngempela, uphelele kakhulu kunathi. Kwaba kubanda - ukulala nje, hhayi ukuphazamisa, indlela yokwenza izimo ezingenakubekezeleka okungcono kakhulu. Futhi sinqotshwa ukulala ebusika, futhi ngifuna ukunciphisa inani lamacala nokuxhumana okungenani. Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kufana nokucindezeleka. Eqinisweni, asinayo ilanga elanele lemvelo. Izibalo zethu eziphilayo zihlobene ngokuqondile nokushintshaniswa kwemini nobusuku, futhi phakathi nomsebenzi, ukukhanya kwemini kubalulekile nje kithi. Ebusika, lapho kufanele siphume ebumnyameni futhi siqhubeke nebhizinisi lethu ngemva kokushona kwelanga, sizizwa siphukile. Ngokukhanya kwelanga, ukujabula kubonakala - ngenxa yokuthi ngaphansi kwethonya elangeni elingaphansi kwe-hormone melatonin ekhiqizwa, elawula inqubo yokulala.
Sizobe sikwazi ukumelana nokucindezeleka okuningi. Noma yiziphi izinkinga ezizobonakala ngathi kulula, noma yiziphi izinkinga ezingenakunqotshwa. Ehlobo, ngaphansi kwethonya elangeni, izinga lokukhathazeka liyancipha ngenxa yokuthuthukiswa okusebenzayo kwe-vitamin D. Ikhuthaza ukukhipha i-magnesium, ukungabi nalutho okwenza kube nzima kakhulu ukusebenza komsebenzi wesifo sezinzwa. Yiqiniso, ehlobo kunezikhathi zokujabula nokukhathazeka. Kodwa kubalulekile ukubuka ngaphandle kwefasitela, ukuhamba emgwaqweni, futhi ihlobo "umbala wezokwelapha" liyovele lijabule ngokushesha. Umbala ohlaza uzothuthukisa ukukhathazeka futhi unike umqondo wokuzinza. Ubuluhlaza buzokwenza ngcono ukusebenza kwesistimu yenhliziyo. Ukubheka kancane ophuzi kukwanele ukuthi umuntu omdala unomuzwa wokuthi isici sezingane - ukujabulisa okungenangqondo, isifiso sokwamukela umhlaba wonke. Futhi obomvu nokubomvu ngesamba esincane esigcwele ithemba netandla. Manje konke lokhu kuyizinhlobonhlobo zembala futhi kunesilinganiso esifanele ukuthi sihlala njalo phambi kwamehlo ethu nangaphansi kwezinyawo zethu. Futhi ngomqondo wangempela wezwi.
Sizophenduka unkulunkulukazi wokudlala ngothando! Ehlobo sivulekile kakhulu ukunconywa, sizimisele ngokwengeziwe ukuzijwayela nokudlala ngothando. Ngisho nabasekeli abaqinisekisayo bokuziqhenya kwamanye amazwe bayaqaphela: kusukela ngoJuni kuya kuAgasti ngalezi zinkolelo kunzima ukuhlala. Kunezidumbu ezinamathele nxazonke, izingubo ezikhanyayo nobuso obomomothekayo! Kodwa akusibo okufanele basolwe, yizo zonke "izinyathelo" zemvelo. Inzalo enamandla kunazo zonke ezimweni zemvelo yilokho okuzalwa eduze nonyaka ofudumele. Ngakho-ke, kubalulekile ukuyikhulelwa ekwindla. Ngakho, ehlobo udinga ukukhetha ngokushesha umlingani! Ngaphansi komthelela wokushisa, izinto ezikhethekile ezikhiqizwa ngumzimba ziyasebenza - ama-pheromones, okwenza ukukhanga kwethu kube lula!
Sizobe sesilungele ukufeza. Ehlobo, abantu banethemba elikhulu emakhono abo. Izazi ze-anthropologists bakholelwa ukuthi sesaba amakhaza ezakhi zofuzo futhi, ngokuphambene nalokho, uzizwa uvikelekile lapho kufika ukushisa. Ngandlela-thile, kodwa umsebenzi wezobuchwepheshe uvela ehlobo kuwo wonke amazwe anezinguquko ezizwakalayo zonyaka. Lokhu kuqinisekiswa "ngethonya lamafu" elitholwe umcwaningi u-Edward Saunders waseMassachusetts University. Iqukethe ukuthi esimweni sezulu esishisayo nasesimo sezulu esibhakabhakeni, umsebenzi wezohwebo uyancipha, ngezinsuku ezishisayo - kukhula.
Sizojabula futhi singakhathazeki. Ngaphansi kwethonya elangeni kwandisa ukukhiqizwa kwama-endorphin - ama-hormone ajabulisayo. Siqala ukubona iqiniso ngokwengeziwe nokuphatha abantu abaseduze nathi ngomusa. Ngakho-ke, ehlobo sithembela abantu abaningi futhi sithandeka kakhulu. Thina ... sizokhula ngokuhlakanipha. Ningikholelwa mina? Futhi kuyize! Kubonakala ukuthi ilanga lenza ngcono umsebenzi wengqondo nokudala. Lokhu kuxhomeka kunamandla kakhulu kubantu abanezinhlobo ezibuthakathaka zobumnene. Yonke ebusika bangakwazi ukuhlala esimweni sokuqothulwa kokudala, behlukumeze nxazonke ngokubonakala kwabo okukhathele. Kodwa lapho sebephila nemisebe yokuqala yelanga elishisayo ehlobo, ngenyanga bayokwenzela yonke into abalala ngayo ebusika, bese kuthi ngaphambi kwekwindla bazothuthukisa ubuholi ngemibono yokudala.
Futhi, ekugcineni, sizophenduka ubuhle! Sivame ukucabanga ukuthi isikhumba siguga emisebeni yelanga. Kodwa lokhu kuphela uma uziphatha ogwini njengenkukhu ebongwe. Eqinisweni, akulimazi ngokulinganayo kuphela ukushisa kwelanga, kodwa futhi nokuntuleka kwayo. I-solar energy ivuselela izinqubo zokuvuselela isikhumba, ivuselele ukuhlanganiswa kwamagciwane e-collagen ne-elastin. Isikhumba sibukeka sibushelelekile, sihlanzekile futhi sincane. Umoya usukuma, simomeza nxazonke - futhi umhlaba wonke ezinyaweni zethu!
Naphezu kwezinguquko ezinhle, akunakwenzeka ukubiza ihlobo isikhathi senjabulo yonke. Abantu ababhekana nezinkinga zemizwelo ngalesi sikhathi sonyaka baqhubeka beqhubeka. Ungaphinda ngemuva kwezigaba: "Awu, ihlobo libomvu, ngabe ngabe ngikuthanda, lapho kwakungeyona intukuthelo nokushisa, hhayi umiyane nezimpukane ..." Nokho, zonke izitha zasehlobo - izimangalo zabo ngesikhathi sishisayo.
Kodwa iningi lehlobo liba "isihlamba" sokulindela okungakagcwaliseki. Sasizolahlekelwa isisindo, ekugcineni senze ukugijima ekuseni, ukuya olwandle, kodwa ... Ubuvila, kwakungekho imali, umsebenzi wawuhlanganisiwe - futhi zonke izinhlelo zethu zahlala zihleliwe. Yiqiniso, ngokucasuka! Lokho nje ... futhi nangu ehlobo?
Qaphela, ukucima kwehlobo! Isikhathi sasehlobo asikho lutho olunikezwayo, kodwa kuphela izazi zengqondo zithi: uma umuntu eqala ukucindezeleka, ngo-May-Juni, kungase kube nzima nakakhulu. Imvelo ibonakala iyincenye ye-dissonance nesimo somuntu: "Kuzo zonke izimbali, wonke umuntu uyajabula futhi ngizizwa kabi kakhulu.
Ngakho, isimo asikho ithemba.
Ungathandi ihlobo nalabo abasemsebenzini kumele baxoxe njalo nabantu abaningi. Ngenxa yokuthi ukucasuka kwehlobo kukhula, ngisho nabantu abazolile bangakwazi ukubhekana nezingxabano. Kungani? Ukushisa kungenye yezinto ezibalulekile zokuhlukunyezwa.
Los Angeles - idolobha lesono kanye nendawo yezokuvakasha kwezwe
Izindawo zokuhlala ze-Abkhazia
Ikusasa eliwusizo for a tourist esebenzayo
Imidlalo Yonyaka Omusha nemincintiswano yezinkampani
Hlala eRiphabhulikhi yase-Altai
Avialove ngaphandle kwemingcele: thola uthando futhi uhambe uhambo lothando
Ingulube ebilisiwe ekhukhulayo ku-multivark
Ubisi bokunciphisa - ingabe iyasiza noma yingozi?
Ukubeletha amawele: izici, izithombe, indlela yokuzibona
Ikhekhe le-carrot i-Aargau
Isobho se-mushroom cream
Amapayipi namanye ama-detergents
Ubukhulu bezingxenye zomzimba kubonisa izifo zethu
Amavithamini wokuzivikela kwezingane ezineminyaka emithathu ubudala
Ubhontshisi bongo, inkohliso encane yabesifazane
Iklabishi isetshenziswe emanzini amaningi
U-Eldar Ryazanov washona eMoscow
I-Lapaho-tea yi-cocktail yamaminerali abalulekile kakhulu kanye nezakhi zokulandelela
I-puff pastry ne-sinamoni, iresiphi yaseFrance enezithombe
Ukuphulwa komjikelezo wesimiso wentombazane
Njengowesifazane uzothola ukuzethemba
Indlela yokunquma ubulili bomntwana